Angela Ahrendts Na-ekwu Na Ọ Na-emeso Ndị Ọrụ Storelọ Ahịa Apple Dị Ka Ndị Isi | Esi m mac
Angela Ahrendts na-ekwu na ya na-emeso ndị ọrụ Apple Store dị ka ndị isi ụlọ ọrụ
Angela Ahrendts, onye isi nke ụlọ ahịa Apple, kwuru okwu n'oge a na-agba ajụjụ ọnụ na ngwa ngwa ụlọ ọrụ gbasara oge ya na Apple na ihe afọ abụọ mbụ pụtara maka ya. na-eduga dị ka isi nke nkewa ụlọ ahịa Apple na isi nkesa.
Dịka ọtụtụ n'ime unu maraworị, Ahrendts bụbu onye isi oche nke ụdị ejiji dị elu, Burberry, site na nke ọ jisiri ike wepụ isi na ahụmịhe niile iji tinye ụfọdụ mgbanwe aghụghọ na ndị ọzọ na-abụghị nke ukwuu, n'ime ụlọ ahịa nke Manzana . Mgbanwe ndị a gụnyere, dịka ọmụmaatụ, ịgwọ ndị ọrụ, ebe ya onwe ya gosipụtara na usoro ya bụ Na-emeso ha otu ị ga-esi emeso ndị isi ọrụ.
Ahrendts kwuru na n'ime ọnwa isii mbụ ya na Apple, ọ ga-aga ahịa 40 dị iche iche ma soro ndị njikwa azụmaahịa kachasị elu na nke ọ bụla. Ọ kọwara na Apple Stores dị ka ụlọ ahịa mkpọsa, bụ "Ijikọta ndị ọrụ were ọrụ ma mee ka ha rụkọta ọrụ ọnụ."
Ikekwe ihe kachasị dị ịtụnanya banyere ihe o kwuru bụ na Apple na 2015 nwere ọnụ ọgụgụ kachasị njigide na ndị ọrụ ụlọ ahịa na mgbe ọ bụla, ya bụ, guzo na pasent 81. Iji rụọ ụka a, Ahrendts kọwara na ọ naghị ahụ ndị ọrụ ụlọ ahịa naanị dị ka ndị ọrụ obere ọrụ, mana ọ na-ahụ ha dị ka ndị isi ụlọ ọrụ "ha na ndị ahịa na-emekọrịta ngwaahịa nke Jony na ndị otu ya wepụtara ọtụtụ afọ iji mepụta.», Ya mere, ọ na-eme ka o doo anya. mkpa nke ịnyefe echiche ziri ezi nke ngwaahịa a n'aka onye ahịa ma ọ bụ onye ọrụ, ya mere ọ dị mkpa na yinye.
Ndị isi ahụ kọwara na onye ọ bụla na-arụ ọrụ na Apple nọ ebe ahụ "ịgbanwe ndụ ndị mmadụ." Ọ karịrị naanị ngwaahịaNa mgbakwunye, na ekele maka atụmatụ Tim Cook, anyị na-etinye aka na nsogbu mmekọrịta mmadụ na anyị na-anwa ịhapụ ụwa karịa ka anyị siri chọta ya:
Otu ọnwa tupu ịmalite ọrụ, agwara m di m ihe m na-aghọtabeghị mbụ: “Ugbu a amatala m ihe kpatara nke a ji bụrụ otu n'ime ụlọ ọrụ na-aga nke ọma n'ụwa: Ọ bụ n'ihi nke ya omenala na ụkpụrụ siri ike dị ka mpako, nchebe na ụkpụrụ '. E hiwere ụlọ ọrụ ahụ na ntọala iji gbanwee ndụ ndị mmadụ. Uche ọrụ ahụ, nke ahụ na-akpata ịgbanwe ihe, bụ isi uru na ụlọ ọrụ a. Tim Cook gwara anyị na ọ bụkwa ọrụ dịịrị anyị ịhapụ ya nke ọma karịa ka anyị siri chọta ya. Yabụ ebe a ị nwere ogidi abụọ dị ịtụnanya na ọdịbendị ewuru gburugburu nke ahụ. Otú ahụ ka ọ dịkwa na ngalaba mkpọsa na ọfịs Cupertino.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Apple » Noticias » Angela Ahrendts na-ekwu na ya na-emeso ndị ọrụ Apple Store dị ka ndị isi ụlọ ọrụ
Igodo iji ghọta nsonaazụ ego Apple
OS X 10.6 Snow agụ owuru a na-emelite maka mma ndakọrịta na App Store